Mashruuca Diwaangelinta Dadka Guryaha Ku Hoos Xidhan | Somaliland Mental Health Support Organisation
Mashruuca Diwaangelinta Dadka Guryaha Ku Hoos Xidhan
Hay’addu waxa ay u xil-saaran tahay caawinta dadka maskaxda ka jirran ee la dhibaataysan xanuunada dhimirka. Hadaba, si loo xoojiyo hawlaha lagu caawinayo dadkan xanuunada dhimirka la nool, loona balaadhiyo masaafadda hay’adda caawimadeedu gaadho waxa aanu isku daynay in aanu daahfurno mashruuc balaadhan oo lagu diwaangelinayo dadka la dhibaataysan xanuunka dhimirka ee ku xidhan guryaha hoostooda iyo dhirta anagoo kaashanayna ururka Nasteexo oo markii horeba hawshan diwaangelinta dadka guryaha ku hoos ku xidhan ku hawlanaa.
Mid ka mid ah dhibanayaasha xanuunka dhimirka dartiis u waayay laxaadkiisa
Intii aanu wadnay barnaamijkaas waxa aanu helnay in ka badan 500 oo qof oo ku hoos xidhan guryo iyo dhir hoosteeda, dadkani ma helaan wax caawimo ah, waxa ay ku nool yihiin xaalad darxumo oo xanuunka ay u dheer tahay daryeel la’aan madaama oo badankoodu ay ka soo jeedaan reero aad sabool u ah. Dadkan xanuunsanayaa waxa hu’ u ah cadceeda kulul ee aanay meel ay ka galaan haysan, iyo dhaxanta habeenkii oo badankoodu ay xanuuno kale oo ugu biiray kii dhimirka ka qaadeen.
Looma awooda dadkan in la geeyo cusbitaal lagu daweeyo, qaarkoodna dawo iska daaye ma helaan waxay cunaan oo waayidda xuskooda waxa u dheer in aanay haysan dhamaan aasaasiyaadkii nolosha sida, cunto, hoy, biyo nadiifa iyo dhamaan xuquuqdoodii dadnimo. Waxaa intaas u dheer in qaar kamid ahi silsiladihii lagu xidhayay ay ku waayeen laxaadkooda oo imika xanuunka dhimirka ay u dheer tahay naafonimo.
Mid kamid ah walaalaheena dhibanaha u ah xanuunka dhimirka ee ay hoyga u tahay qoraxda maalintii iyo dhaxanta habeenkii
Gabagabadii, daahfurka dadkan xanuunka dhimirka la nool ee guryaha iyo dhirta ku hoos xidhani waa bilow waanu socon doonaa ilaa aanu helno qof kasta warbixintiisa oo dhamaystiran. Waxaanu mustaqbalka dadkaas muwaacimo u waydiiin doonaa walaalahooda caafimaadka qaba si loo caawiyo anaguna wixii aanu awoodno waanu la qaban doonaa hayday tahay dawayn iyo daryeel kale labadaba. Aad baanu uga xunahay in aanaan idiin soo gudbin karin sawirada dadka aanu diwaangelinay anagoo ilaalinayna xuquuqdooda. Hadaba, walaal caawi walaalahan xanuunka dhimirku aafeeyay.
Fiiro gaar ah, dadkan aanu idinla wadaagnay sawiradooda hay’addu fasax ayay ka haysataa
Previous Previous post: Sanaaduuqda Mucaawimada Loogu Ururiyo Dadka Dhimirka Ka Jirran
Next Next post: Fundraising event in Liverpool